तपाईंसँग आईटीलाई आम जीवनसँग जोडेर व्यापार गर्ने ‘आइडिया’ छ ? - सूचना प्रविधि - कान्तिपुर समाचार
नयाँ सोच र आईटीको ज्ञान भएका जोसुकैले यस क्षेत्रको व्यवसाय सुरू गर्न सक्छन् । आईटीको औपचारिक अध्ययन नगरेकाले पनि सक्छन् । तर प्राविधिक विषयमा व्यावसायिक सम्झौता गर्नुपर्ने हुँदा यससम्बन्धी आधारभूत सीप सिक्नु जरूरी छ ।
फाल्गुन ६, २०७३-उबर, फेसबुक र अलिबाबा । तीन फरकखाले व्यापार गर्ने विश्वकै सबैभन्दा ठूला कम्पनी । भिन्न–भिन्न व्यापार गरे पनि यी कम्पनीबीचको एउटा समानता हो– जे कुराको व्यापार गर्छन् त्यही वस्तु आफूसँग नहुनु । कसरी ? उबर विश्वकै सबैभन्दा ठूलो ट्याक्सी कम्पनी, उससँग एउटा पनि ट्याक्सी छैन । फेसबुक संसारकै सबैभन्दा ठूलो ‘मिडिया कन्टेन्ट’ उत्पादन र वितरण गर्ने कम्पनी, तर उसले आफैं कुनै पनि ‘मिडिया कन्टेन्ट’ बनाउँदैन । अनि, अलिबाबा संसारकै सबैभन्दा ठूलो खुद्रा बिक्रेता, उसको आफ्नै कुनै उत्पादन छैन ।
रोजाइमा टर्की–अस्ट्रिच ›